कांग्रेसकी चर्चित सांसदले जन्माइन बिबाह नै नगरी बच्चा — Imandarmedia.com
काठमाडौ। एक चर्चित सांसदले बिबाह नै नगरी बच्चा जन्माएकी छिन्। अभिनेत्रीसमेत रहेकी तृणमूल कांग्रेस टीएमसीकी नुसरत जहाँले बिबाह नगरिकनै बच्चा जन्माएकी हुन्। बाबुको टुङ्गो नभएरै छोरा जन्माएपछि नुसरत तनावमा छिन्। अभिनेत्रीले एक छोरालाई जन्म दिएकी हुन्।
आमा बनिसकेपछि फ्यान र सेलिब्रेटीहरु नुसरतलाई बधाई दिइरहेका छन्। नुसरत जहाँको गर्भावस्थाको बारेमा धेरै विवाद भएको थियो। नुसरत धेरै दिन देखि गर्भवती भएको खबरहरु आएका थिए।
पछि नुसरतले बेबी बम्प देखाउँदै सार्वजनिक गरेको तस्विर भाइरल भयो। त्यसपछि उनको गर्भावस्था पुष्टि भयो। जब नुसरतको गर्भावस्थाको खुलासा भयो, त्यस समयमा उनी पति निखिल जैनसँग अलग भएको कुरा चर्चामा थियो।
नुसरतको २०१९ मा निखिल जैनसँग विवाह भएको थियो। तर यस वर्ष भएको तनावपछि उनीहरु अलग भएका छन्। नुसरतको गर्भावस्थामा निखिल जैनले भनेका थिए कि उनी यस बारेमा केहि जान्दैनन्।
उनले त्यसबेला पेटमा हुर्कदै गरेको बच्चा आफ्नो नभएको बयान दिएका थिए। त्यसबीच, नुसरत जहाँको अभिनेता यश दासगुप्तासंग अफेयर भएको चर्चा चल्यो। नुसरत जहाँ र निखिल जैनले सार्वजनिक रुपमा एक अर्का बिरुद्ध धेरै गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
निखिलले नुसरत र यश दासगुप्ताको अफेयर तिर इशारा गरेका थिए। यद्यपि निखिलले सीधै यशको नाम लिएनन्। तर यो पक्कै संकेत गरिएको थियो कि उनीहरुको सम्बन्धमा तनाव यशको कारणबाट आएको हो।
नुसरतले निखिलसँगको बिहे अमान्य भन्दै अलग भएपछि आफ्नो एक बयानमा भनेकी थिइन्, ‘टर्की विवाह नियमनको अनुसार, एक विदेशी भूमिमा भएकोले, विवाह अमान्य छ।
तेस्तै, विद्यार्थी भिसामा दुई वर्षदेखि नेपाल बस्दै आएकी तान्जानियाकी २६ वर्षीया गट्र्युड लियोनार्द किमोरो पक्राउपछि लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृत ढुक्क थिए–लागुऔषध कारोबारको नेपाल ‘नेक्सस’ अब हात लाग्नेछ ।
किनभने उनी लागुऔषध कारोबार नेपालमा ‘एन्टी सर्भिलेन्स’को भूमिकामा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै देखिएको थियो । तर, उनीमाथिको विस्तृत अनुसन्धानले परिणाम थप गम्भीर देखायो । किमोरोसँग उपलब्ध सबै सामग्री बरामद गरेर मिहिन विश्लेषण गर्दा उनी लागुऔषधबाहेक यौनधन्दामा पनि संलग्न रहेको भेटियो ।
उनले प्रयोग गर्ने मोबाइल र ल्यापटप ‘डिभाइस’मा यौन कारोबारका दररेट तोकिएको सन्देश भेटिए । ग्राहकको सूचीसमेत भेटियो, जसमा प्रतिष्ठित घरानादेखि व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको नामावली ‘कोड’ भाषामा समावेश थिए ।
अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी नागरिकसँग पनि उनको सम्पर्क हुने गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी जीवन श्रेष्ठले भने, ‘लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधलाई ब्युरोले मिहिन ढंगले केलाउँछ । प्राप्त प्रमाण विश्लेषण गर्नु हाम्रो ड्युटी हो । हामीले कोक– २ अपरेसनमा पनि त्यही गर्‍यौँ ।
यस क्रममा पक्राउ परेकी तान्जानियाली युवती लागुऔषध कारोबारबाहेक अन्य धन्दामा पनि संलग्न रहेको सुराक हामीले फेला पार्‍यौँ । उनीसँग सम्पर्क भएकी अन्य युवतीको धन्दा पनि शंकास्पद नै देखिन्छ । यिनीहरूलाई अब निगरानीमा राख्न जरुरी छ । नत्र ढिलोचाँडो दुर्घटना हुने निश्चित छ।
किमोरो गत जनवरीमा प्रदर्शनीमार्गस्थित विश्वभाषा क्याम्पसमा भर्ना भएकी थिइन् । दुई किलो नौ सय ६६ ग्राम कोकिन कारोबारका क्रममा सिन्धुलीको खुर्कोटबाट पक्राउ परेपछि विद्यार्थीको आवरणमा उनले गरेको अपराध सार्वजनिक भएको थियो ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ कान्तिपुरहाइटस्थित कासाबेल अपार्टमेन्टमा यौन धन्दा संचालन भएको पाइएको छ । प्रहरीले ६ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो।
अपार्टमेन्ट को ५ औं तल्लामा यस्तो धन्दा चलेको थाहा पाएपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो । ‘हामी प्रहरी हौं, तपाईंहरू कतै नजानुस्,’ ढोका खोल्नेबित्तिकै प्रहरीले यसो भन्दा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानरपालिका– ३ सानोपोखराकी ४२ वर्षीया एक महिला हतार–हतार कपडा मिलाउन थालिन्।
अरू पनि हस्याङफस्याङ गर्दै उठे। केही त अर्धनग्न अवस्थामा थिए । एक्कासि प्रहरी पुगेपछि उनीसहित ७ जनाले आफूहरू आफन्त भएको नाटक गरे, तर प्रहरी पत्याउन तयार थिएन । पूर्व सूचनाका आधारमा नै त्यहाँ छापा हानिएको थियो ।
फरार अवस्थामा रहेकाले प्रहरीले उनको वास्तविक पहिचान खुलाएको छैन। प्रहरी ग्राहक बनेर अपार्टमेन्टमा छिरेको थियो । गेटमा नाम टिपाइदिनेदेखि ढोका खोल्न लगाउनेसम्मको काम तिनै महिलाले गरेकी थिइन्।
ढोकामा अत्याधुनिक सेक्युरिटी सिस्टमको लक कोड राखिएको रहेछ। प्रहरीलाई त्यहाँ छिर्नका लागि ६ महिनासम्म अनुसन्धान गर्नुपरेको थियो । प्रहरीका अनुसार यौनधन्दा चलाउने मुख्य व्यक्ति पैसा मिटरब्याजमा लगाउने र मानव बेचबिखनमा समेत संलग्न छन् । उनी अहिले फरार छन् । प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर खोजी रहेको छ।
उनीहरूले त्यहाँबाट फोनमार्फत ग्राहक खोज्ने र उनीहरूलाई सम्पर्क गरेर यौनधन्दा चलाउने गरेको देखिएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) किरण बज्राचार्यले बताइन्।
‘उनीहरूले त्यसलाई अफिसको रूपमा राखेका रहेछन्,’ एसएसपी बज्राचार्यले भनिन्, ‘त्यहाँबाट ग्राहक खोज्ने, बोलाउने र धन्दा चलाउने गरेको देखियो। एसएसपी बज्राचार्यका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण फोनबाट सम्पर्क गर्ने र त्यसअनुसार नै व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइएको छ।
उनीहरूले यौन धन्दा व्यवसायिक रूपमा चलाउँदै आएको समेत पुष्टि भएको छ । त्यसका लागि उनीहरूले एक जना लेखापाल (एकाउन्टेन) राखेका थिए। ती लेखापालले दैनिक कति ग्राहक आए ? को–को आए ? कति पैसाको यौन व्यापार आयो र कति कमिसन आयो भन्ने राख्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।
उनीहरूले त्यसका लागि ३ वटा ‘डे बुक’मा पैसाको व्यवस्थापन गर्दै आएको देखिएको छ। ‘उनीहरूले को व्यक्ति आएरगए भन्ने कुरा राख्नका लागि ३ वटा डे बूक व्यवस्थापन गरेका थिए,’ एसएसपी बज्राचार्यले भनिन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले एकजना ग्राहकसँग न सम्पर्क गरेबापत एक युवतीबाट २५ प्रतिशत कमिसन समेत लिने गरेका थिए।
उनीहरूले व्यक्ति हेरेर ३ हजारदेखि १० हजारसम्म प्रतिव्यक्ति लिने गरेको देखिएको छ । ‘उनीहरूले व्यक्तिको हैसियत हेरेर रेट लिँदारहेछन्, त्यसमा विभिन्न खालका व्यापारीहरू पनि आउने गरेको देखिएको छ,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले भने।
प्रहरीले पक्राउ परेका महिलाहरूसँग लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूले लगभग १०र१२ हजार व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क भएको देखिएको छ। त्यसमा व्यक्तिहरू दोहोरिएका पनि छन्।
उनीहरूले यौन सम्पर्क स्थापित गर्ने व्यक्तिहरूको नाम तथ्याङ्कमा विदेशी महिलाको नाम जस्तै राख्ने गरेको समेत पाइएको छ । प्रहरीले भदौ १ गते दिउँसो साढे ३ बजे ४ जना पुरुष र ३ महिलालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको पहिचान समेत खुलाएर प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
पक्राउ पर्नेमा हेटौँडा उपमहानरपालिका– ३ सानोपोखराकी ४२ वर्षीया गीता खड्गी, झापा दमक नगरपालिका– ७ का ५० वर्षीय राजेशअग्रवाल, रुकुमकी २३ वर्षीया ललिता बिक, बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी २९ वर्षीय सुनिल विष्ट रहेका छन्।